Sarifka lacagta doolarka oo hoos u dhacay - NorSom News
Sarifka lacagta doolarka oo hoos u dhacay
Sarifka lacagta dollarka ayaa maanta hoos u dhac ku yimid, oo sarifka 100-kii dollar ayaa maanta markii ugu horey mudo sanad iyo bar ah gaartay wax yar 800 oo krone. Lama oga sababta dhabta ah ee ka danbeysay hoos u dhacan saaka ku yimid sarifka lacagta dollarka oo ah mid saameyn aad u weyn kuleh dhaqaalaha aduunka guud ahaan, kan wadankeenii Soomaaliya iyo jaaliyada soomaaliyeed ee dagan Norwey. Sarifka lacagta dollarka ayaa ilaa bartamihii sanadkii 2014 ahaa mid sare u kacayay ayada oo uu xiriir la leeyahay qiimaha shidaalka oo ah lafdhabarta dhaqaalaha wadankan aan kunoolnahay.
Xawaaladleyda soomaalida ee lacagta dira soomaaliya ayaa 100-kii dollar saarta lacag dhan ilaa shan dollar oo khidmo ah, sidaas darteed hadii aad rabtid inaad maanta soomaaliya lacag u dirtid qiimuhu waxa uu noqonayaa sidatan:
DOLLAR 100+5=105 NOK: 877 kr
Hadii aad rabto inaad xisaabiso lacagta aad u dirayso soomaaliya adoo gurigaada joogo, waxaad ka xisaabin kartaa DNB valutakalkulator:
Previous articleMaxkamada sare oo go aan ka gaarayso in Yaasmiin in lagu celiyo Hungary iyo inkale.
Next articleAmal Adan oo markale eedeysay waalidiinta soomaalida iyo ajnabiga ah